क्यामेरा–एक्टिङ कक्षामा भाग लिनूस, अभिनय सिक्नूस - Nepali Cinema News
Home > Nepali > क्यामेरा–एक्टिङ कक्षामा भाग लिनूस, अभिनय सिक्नूस
क्यामेरा–एक्टिङ कक्षामा भाग लिनूस, अभिनय सिक्नूस
August 28, 2018 Nepali
के अभिनयप्रति रुचि छ ? एक्टिङमा चाख भएर पनि आफूलाई निपूर्ण तुल्याउन सक्नुभएको छैन ? यदि तपाईं अर्ध–दक्ष एक्टर हुनुहुन्छ भने तपाईंका लागि खुशिको खबर छ ।
सोबिज् काठमाण्डूले सेमी–प्रोफेसनल एक्टरका लागि अभिनय कार्यशाला आयोजना गरेको छ । सेप्टेम्बर २३ देखि ९ अक्टोबर ८ सम्म हुने कार्यशालामा नेपाली फिल्मका दक्ष निर्देशक र एक्टरले अभिनय कलाबारे कक्षा चलाउनेछन् ।
नेपालबाट अस्कर अवार्डमा सिफारिस फिल्म सुनगाभा (२०१२) फेम्ड निर्देशक सुवर्ण थापाले कार्यशालाको अगुवाइ गरेका छन् । ‘सहभागिको क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्दै उनीहरुलाई अभिनयप्रति अभिमुख गर्नु कार्यशालाको उद्देश्य हो’ थापाले मूभिमान्डुसँग भने ।
अभिनय र क्यामेराको प्रयोगसँगै कक्षामा ६० घन्टा सिकाइने भएको छ । ‘यो ६० घन्टे कोर्स हो र क्यामेरा एक्टिङबारे सिकाइनेछ’ उनले भने । कक्षामा अभिनयको आधारभूत पक्ष, क्यामेरा एक्टिङ, अडिसन तयारी र प्रोडक्सनबारे सिकाइनेछ ।
थप बुझ्न चाहे सोविज् काठमाण्डूको यो अफिसियल फेसबुक पेजमा म्यासेज पठाउन सकिनेछ । साथै, ९८११३५८६०९ मा फोन गर्न सकिने जनाइएको छ ।